Rugby Analamanga : misy fanahiana fampiasam-bola amin’ny fifidianana | NewsMada
Mampametra-panontaniana ihany ny zava-misy eo amin’ny tontolon’ny baolina lavalava eto Analamanga, amin’izao fotoana izao. Mandeha ny resaka fa toa misy fampiasam-bolabe ataon’ireo kandidà.
«Izay kandidà mahasahy mandoa volabe no lany ho filohan’ny ligin’ny rugby Analamanga». Izany ny ambentin-dresak’ireo ao anatin’ny tontolon’Ambalambahoaka, mialoha ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny taranja baolina lavalava, ho amin’ny taom-piasana manaraka. Tsy an-kijery fandaharanasa sy tsangan-kevitra intsony izao, raha ny fanambaran’izy ireo, fa izay be masom-bato ihany ny hofidina.
Araka ny tsilian-tsofina, misy amin’ireo kandidà, mirotsaka ho fidiana sasany, efa mividy ny filohan’ny seksiona sy ny klioba, mba handrotsa-bato ho azy. Misy ireo manome 5 tapitrisa Ar ny hafa kosa, miakatra ho 7 tapitrisa Ar ary mbola mety hitombo izany mandra-pahatonga ny andron’ny fifidianana. Hatreto anefa, tsy mbola voamarina sy voaporofo ny fisian’izany fa mijanona ho siosion-dresaka fotsiny.
Raha mitombina izany, azo antoka fa tsy hisy fampandrosoana ity baolina lavalava ity izany hataon’izay kandidà nandoa vola ka lany fa tsy maintsy hamerina ny vola laniny izy aloha, vao hieritreritra izany.
Manantena koa nefa Ambalambahoaka fa ho hentitra ny minisitera sy ny Ceni ary ny Malagasy Rugby amin’ny fanaraha-maso ireo izay tsy manara-dalàna. Etsy ankilany, mbola miandry ny valin’ireo fitoriana nataon’ireo kandidà tany amin’ny seksiona Atsimondrano sy Avaradrano ny rehetra.